काठमाडौँ, २१ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेताको ‘बार्गेनिङ’ का कारण लामो समयसम्म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कार्यकारी प्रमुखविहीन बनेको छ ।
उपकुलपति पद रिक्त भएको ३ महिना पूरा भइसक्यो तर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नेकपा नेताले आफू निकटकालाई नै उपकुलपति बनाउन अडान जारी राख्दा सो पदको नियुक्ति अझै अन्योल बनेको नास्टका अधिकारी बताउँछन् ।
‘राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा भीसी नियुक्त गर्ने पुरानै प्रचलन हो, तर यसपटक किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, समग्र नास्ट परिवार अन्योलमा छ’ –सो निकायका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
यसअघिका उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेलको कार्यकाल गत भदौ १४ मा सकिएको थियो । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन नसक्दा नास्टक प्राज्ञ सभाको बैठक बस्न सकेको छैन भने अन्य वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार उपकुलपतिको दौडमा नास्टका प्राज्ञद्वय डा. दिनेश भुजु, डा. ऋषि शाह, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठ, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय रमेश मास्के र जनार्दन लामिछाने हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी लामिछाने विगतमै तत्कालीन माओवादी निकट भनेर चर्चामा हुनुहुन्थ्यो । शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ सदस्यीय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नास्टका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विगतमा समितिले सिफारिस गरेको करिब एक सातामा नास्टले नयाँ उपकुलपति पाएको उदाहरण छन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।